ड्राइभिङ लाइसेन्सको अनलाइन फारम खुल्याे : कोटा सिस्टम हट्याे, कसरी भर्ने फारम ? « Drishti News – Nepalese News Portal
ड्राइभिङ लाइसेन्सको अनलाइन फारम खुल्याे : कोटा सिस्टम हट्याे, कसरी भर्ने फारम ?
९ माघ २०७७, शुक्रबार 3:04 pm
काठमाडौं, ९ माघ । सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को अनलाइन फारम आज (शुक्रबार)बाट खुलेको । यातायात व्यवस्था विभागले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै लाइसेन्सको अनलाइन फारम खुला गरेको जानकारी दिएको छ ।
विभागले लाइसेन्स लिनका लागि भरिने फारममा लगाएको कोटा प्रणाली हटाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले भने, ‘हामीले सर्भरको समस्या सुल्झाएर परीक्षण पनि गरिसक्यौँ। अब सेवाग्राहीले सातै दिन २४ सै घन्टा फारम भर्न सक्ने छन् ।’
यसअघि दिनको निश्चित सङ्ख्यामा मात्रै अनलाइन फाराम भर्न पाउने व्यवस्था हुँदा फाराम भर्न नपाएको गुनासाहरू आएका थिए ।
आवेदन खुला भए पनि फारम भर्नेको सङ्ख्या अधिक भएकोले कोटा सिस्टम हुँदा अधिकांश सेवाग्राही फारम भर्नबाट बञ्चित थिए । त्यस्तै केही दिनदेखि आएको सर्भरको समस्याले अनलाई आवेदन प्रणली बन्द थियो ।
अनलाइन फारम भर्नका लागि यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइट (www.dotm.gov.np) मा जाने । त्यसको भित्र दायाँ साइडमा रहेको ‘महत्वपूर्ण लिङ्कहरू’ भन्ने सेक्सनभित्र रहेको ‘अनलाइन सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणाली’ लिंकमा क्लिक गर्ने ।
त्यसपछि पेजको सबभन्दा माथि अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिस्ट्रेसन ‘Online Driving License Registration’ मा क्लिक गर्ने ।